कोरोनाको कहर किसानमा : दानाको अभाव, दूध उत्पादन घट्यो | Himalaya Post
Posted by Himalaya Post | २३ चैत्र २०७६, आईतवार १७:५८ |
सुशीला रेग्मी, पाल्पा – पाल्पा माथागढी गाउँपालिका–२ रुप्सेका अगुवा कृषक कृष्ण भट्टराईले दैनिक कम्तीमा एक सय लिटर दूध उत्पादन गर्थे । दूध बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी गर्ने उनलाई अहिले भने दानाको अभावले अप्ठेरोमा पारेको छ । उनले गाईको दाना नपाएको धेरै दिन भयो । घाँसपातले मात्र नपुग्ने भएपछि दूध उत्पादन घटेको छ । त्यसैले भट्टराइ यतिखेर चिन्तामा छन्।
विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को नेपालमा सम्भावित सङ्क्रमण रोक्न सरकारले देशैभर लकडाउनको घोषणा गरेपछि यतिखेर शहरबजार मात्र होइन ग्रामीण क्षेत्रका किसान पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । कतै दूधले बजार नपाउँदा सडकमा दूध पोखेका त कतै अन्य कृषिजन्य उत्पादनले बजार नपाएका समाचार आइरहेका छन् । पाल्पाका किसानको समस्या पनि यस्तै छ । यहाँका धेरै किसानलाई अहिले पशुलाई दाना नपाइने समस्याले सताएको छ ।
लकडाउनसँगै गाईभैँसीलाई आवश्यक पर्ने पराल तथा दाना आपूर्ति हुन नसक्दा अब के खुवाउने भन्ने चिन्ता एकातिर छ भने अर्कातर्फ आवश्यकताअनुसारको दाना खुवाउन नपाएकोले दूध उत्पादन पनि ह्वात्तै घटेको छ । “सरकारले एक्कासी लकडाउनको घोषणा गरेपछि दानाको बन्दोबस्त गर्नै पाइएन, गाईलपाई दाना जति खुवाउन सक्यो उति धेरै दूध आउने हो, अहिले त दाना खुवाउनै नपाउँदा दिनदिनै दूध घट्दै गएको छ ।” उनले दुःखेसो गरे ।
भट्टराईले बजारमा दैनिक एक सय लिटर दूध बिक्री गर्दै आइरहेकोमा लकडाउनपछि हाल ७० देखि ७५ लिटर मात्र दूध उत्पादन हुने गरेको बताउँछन् । दानाको अभाव भएपछि भकारीमा राखेको धान झिकेर कुटेको र गाईलाई चामलको पीठो खुवाउनु परेको उनले सुनाए । “गाईलाई खुवाउने दाना जति सबै सकियो, लकडाउनको समय अझै थपिँदै गएको छ, गाडी चलेका छैनन्, ल्याउने अन्य माध्यम पनि छैन,” उनले भने, “गाईले दूध घटाउँदै जान थालेपछि अहिले दानाको विकल्पमा चामल तथा पीठो खुवाउने गरेको छु ।”
लकडाउनका कारण कृषक समस्यामा परेको बताउँदै उनले सरकारले दानापानी कृषकको घरदैलोसम्म लैजाने व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग आग्रह पनि गरे। आँफुले सात वर्ष अघिदेखि गाई पाल्न थालेको बताउने उहाँको यस्तो समस्या पहिलोपटक भोगेको अनुभव छ ।
उनको फार्ममा हाल ११ गाई छन्, तीमध्ये दुहुना नौवटा छन् । दानाको अभावमा दैनिकजसो २५ देखि ३० लिटर दूध उत्पादन घटेपछि उनी चिन्तित छन् । रुप्से क्षेत्रमा मात्र झण्डै २२ जना दूध उत्पादक कृषकले यस्तो समस्या भोग्दै आएका छन् । पशु चौपायालाई पर्याप्त दाना खुवाउन नपाउँदा उत्पादन घटेकोमा कृषकले गुनासो गरेका छन् । गाउँमै बसेर केही व्यवसाय गरौँ भनेर पशुपालनमा लागेका कृषक यतिखेर भने लकडाउनको मारमा परेका छन् ।
रामपुर नगरपालिका–६ का अगुवा कृषक कृष्णकुमार अर्याल पनि दूध उत्पादन कम हुदै गएकोमा चिन्तित छन् । उनको फार्ममा हाल उन्नत जातका ३० भैँसी छन् । उनले पनि दैनिक करिव १ सय लिटर दूध लिने गरेकोमा हाल लकडाउनको समयमा दानाको अभाव सिर्जना हुन थालेपछि घटेर ८० लिटरमा पुगेको बताउँछन् । “धेरै पशु भएपछि थोरै दानाले निर्वाह गर्छु भनेर पनि हुने रहेनछ, दैनिकजसो दुई÷तीन बोरा जति दाना चाहिएकै हुन्छ,” उनले भने, “बाहिरबाट ढुवानी गरेर दाना ल्याउन पाइएको छैन यसरी दाना खुवाउन नपाएपछि दिनानुदिन दूध घट्दै छ ।”
घाँसपातले मात्र दूध उत्पादन बृद्धि नहुने हँुदा पशुको लागि दाना नभई नहुने भएकाले लकडाउनसँगै देखिएको दाना अभावको समस्या क गरौँ भनेर सोच्नै नसकेको अर्यालले बताए । रामपुर नगरपालिका–४ सदावर्त बस्ने विनोद श्रेष्ठले लकडाउन लम्बिन थालेपछि आफुसँग थोरै मौज्दात रहेको दाना पनि खुवाउन कमगर्दै गएको बताउँछन् । उन दूध उत्पादनलाई नै आम्दानी बनाएर एक वर्षअघि गाई तथा भैँसीपालन व्यवसाय थालनी गरेका हुन् ।
दूधालु पशुलाई प्रशस्त दानापानी खुवाउन नपाउँदा व्यवसाय नै धरापमा पर्ने स्थिति आउन थालेको उनीगुनासो गर्नुहुन्छ । “ठुलो लगानीमा पशुपालन व्यवसाय थालनी गरियो, बाहिरबाट ल्याइएका उन्नत जातका पशुलाई स्थानीय पशुलाई जस्तो सामान्य दाना दिएर टार्छु भनेर पनि नहुदो रहेछ, एक छाक दाना तलमाथि गरियो भने स्वाट्टै दूध घटाइहाल्ने रहेछ” श्रेष्ठले भने ।
बेझाड बजारको अमृत दुग्ध भण्डारमा दैनिक ३०० पचास लिटर दूध सङ्कलन हुने गथ्र्यो । हाल यहाँ दुईको हाराहारीमा मात्र मात्र सङ्कलन हुन्छ । लकडाउन सुरु भएपछि कृषकबाट दूध कम आउन थालेको डेरी सञ्चालक गणेश आचार्यले बताए । “पहिलाको अनुपातमा कृषकबाट १ सय लिटर दूध कम आएको छ,” उनले भने, “दूध कम किन भयो भनेर सोध्दा कृषकहरूले दाना, चोकर खुवाउन पाइएको छैन भन्नुहुन्छ ।”
पशु आहार दाना चोकरको अभाव हुदा जिल्लामा करिव दुई हजार लिटर दूध उत्पादन घटिसकेको र यो घट्ने क्रम अझै जारी रहनसकने जिल्ला भेटेरीनरी तथा पशुविज्ञ केन्द्र पाल्पाका प्रमुख डा. चन्द्रबहादुर राना बताउँछन् । पाल्पा दूधमा आत्मनिर्भर जिल्ला हो र यहाँ दूध र दुग्धजन्य उत्पादन राम्रै भइरहेकामा अहिले भने यो लकडाउनले गर्दा दूध उत्पादन घट्दा किसानलाई मर्का परेको डा. रानाले बताए ।
सदरमुकाम तानसेनमा एक हजार पाँच सय लिटर दूध खरिद गर्ने डेरीले अहिले दैनिक ५०० लिटर मात्र दूध कृषकबाट आउने गरेकोले त्यसैमा सीमित हुनुपरेको पनि उनले जानकारी दिए । ठूला कृषकले दूध डेरी पसलमा ल्याउने गरेका छन् । साना कृषकले दूध घटेपछि बजार लैजानै छाडेका छन् । जिल्लामा करिव ४०० को हाराहारीमा दूध उत्पादक कृषक छन् । यहाँका कृषकले दूध बिक्री गरेर राम्रै आम्दानी गर्न सफल पनि भएका छन् । यहाँका किसानलाई दूध उत्पादन र बिक्री आयआर्जनको राम्रो विकल्प भएको छ ।
दूधको बजार राम्रो हुदै जानु र दिनप्रतिदिन माग पनि त्यही रुपमा बढ्दै जाँदा पछिल्ला वर्षमा यहाँ ठूला पशुफार्म खुल्ने क्रम बढ्दो छ । विगतमा विदेशिएका युवा स्वदेश फर्केर यहीँ केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ पशुपालनमा आकर्षित भएका पनि देखिएका छन् । तर समय समयमा हुने बन्द हड्ताल, विविध खालका आन्दोलन तथा अहिले आएर लकडाउनको समस्याले कृषकलाई कहिले उत्पादन घट्ने त कहिले बजारै नपाउने जसता समस्याले पिरोल्ने गरेको उनीहरुको अनुभव छ । सरकारले सम्भावित कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम गर्न लकडाउनको समय थप गरेसँगै यतिखेर पनि पशुपालक कृषकहरु आफ्ना गुनासोहरु सम्बन्धित निकायमै पुगेर पोख्ने सोँचमा छन् । रासस
Previousभैरहवा कोरोना परीक्षण प्रयोगशालामा आजदेखि परीक्षण शुरु हुने
Nextचर्को स्वरमा गफ गरेको भन्दै पाँच जनाको गोली हानी हत्या !
मतदान अधिकृत बीच बाटोबाटै सम्पर्कविहीन हुँदा मतपेटिका अलपत्रमा
१२ मंसिर २०७४, मंगलवार ०४:४८
काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माण ७० प्रतिशत सम्पन्न, धुरी राखियो
११ श्रावण २०७७, आईतवार १३:३३
सातवटै प्रदेशबाट कोभिड-१९ को परीक्षण शुरु
१९ चैत्र २०७६, बुधबार १४:५९
प्रदेश राजधानीको माग गर्दै धनकुटावासी आक्रोशित, क्षेत्रीय कार्यालयमा आगजनी
४ माघ २०७४, बिहीबार ११:५५